नेपाली महिला क्रिकेटको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो, खेलाडीले खेल्न नै पाउँदैनन् र यो किन भन्दा नेपालमा महिला क्रिकेट प्रतियोगिता नै हुँदैनन्, तर अहिले आएर एकसाथ दुई ठूला प्रतियोगिताको घोषणा भएको छ । यद्यपि दुवैको आयोजना मिति जुधेपछि शंका उत्पन्न भएको छ, कतै कुनै पनि प्रतियोगिता न नहुने हो कि ? भर्खरै घोषणा भएको प्रतियोगिता हो— वुमेन्स च्याम्पियन्स लिग अर्थात् डब्लूसीएल । यसमा पाँचवटा टिम छन् र त्यसका मार्की खेलाडीको घोषणा पनि भैसकेको छ । यो प्रतियोगिता जेठमा हुनेछ, ३ देखि ११ गतेसम्म, त्यो पनि कीर्तिपुरको मैदानमा । प्रतियोगिताको आयोजक क्विन्स इभेन्ट म्यानेजमेन्ट हो, जसले यसअघि पोखरामा पोखरा प्रिमियर लिग सञ्चालन गरेको थियो । यो प्रतियोगितामा सहभागी हुने टिम हुन्— पोखरा पल्टन, चितवन राइनोज, विराटनगर टाइटन्स, क्यापिटल्स रोयल्स काठमाडौं तथा ललितपुर फाल्कोन्स । केही समयअघि मात्र नेपाल क्रिकेट लिग हुने निश्चित भएको थियो र त्यसका लागि खेलाडीहरूको लिलामी समेत भैसकेको छ । अब प्रश्न उठ्छ— यी दुई मध्ये कुन प्रतियोगिता सञ्चालनमा आउनेछ ?
नारी संवाददाता , वैशाख ७, २०७६
नेपाली महिला क्रिकेटमा प्रसस्तै गुनासा छन् । पहिलो त प्रतियोगिता नै हुँदैन, खेल्नै नपाएको दुःख कस्तो हुन्छ, नेपाली महिला क्रिकेट खेलाडीहरूसँग सोधे हुन्छ । पुरुष खेलाडीको तुलनामा आफूविरुद्ध विभेद भएको आरोप लगाउन पनि चुक्दैनन, महिला खेलाडीहरू ।
नेपालले प्रतियोगिता जित्न सक्छ भन्ने केही आधार पनि थिए, तर फाइनलमा नेपाल फेरि एकपटक भारतकै हातबाट पराजित भयो र भन्नैपर्ने भयो, नेपाली महिला फुटबलले अझै धेरै गर्न बाँकी छ । फाइनलमा नेपाल ३–१ ले पराजित भयो ।
नेपाली महिला फुटबलको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको ३३ वर्षे लामो इतिहासमा यसपटक अनपेक्षित जित हात परेको छ । हालसम्म ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय फाइनल (३ साफ, २ साग, १ हिरो गोल्डकप) स्पर्धामा सहभागिता जनाएको नेपाली महिला फुटबल टिम साफमा प्रायः भारतको सिकार हुँदै आएको थियो ।
लक्ष्मी भण्डारी थापा, चैत्र १४, २०७५
नेफाली महिला क्रिकेट टिम थाइल्यान्ड स्म्यास ट्वान्टी–२० त्रिकेट प्रतियोगितामा उपविजेता भएर स्वदेश फर्किएको छ । पछिल्लो समय खासै नतिजामुखी बन्न नसकेको यो टिमले लगातार सेमिफाइनलमा हार बेहोर्दै आएको थियो । राउन्ड रोबिन प्रतियोगितामा पनि यस्तै देखिएको थियो । थाइल्यान्ड स्म्यास ट्वान्टी–२० क्रिकेट प्रतियोगिताले भने नेफाललाई महिला क्रिकेटमा समेत खुड्किलो चढ्ने आशा जगाएको छ
लक्ष्मी भण्डारी थापा, फाल्गुन २१, २०७५
पिंकाथन काठमाडौंको तेस्रो संस्करणको उपाधि सशस्त्र प्रहरीकी कान्छीमाया कोजुले जितेकी छन् । यसपटक पनि मुख्य प्रतिस्पर्धा हाफ म्याराथनमा सशस्त्र प्रहरीकी कोजु विजयी हुँदै लगातार तेस्रो पटक उपाधि जितेर ह्याट्रिक गरेकी हुन् ।
नारी संवाददाता , फाल्गुन १३, २०७५
नारी संवाददाता , माघ ११, २०७५
नारी संवाददाता , पुस २६, २०७५